Plausible: safidy maivana sy tsy misy rindrina amin'ny Google Analytics | Martech Zone
Zoma, Oktobra 8, 2021 Zoma, Oktobra 8, 2021 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity dia afaka nandany fotoana vitsivitsy tamin'ireo zokiolona amin'ny marketing amin'ny oniversite iray eo an-toerana aho ary nanontany izy ireo hoe inona ny fahaiza-manao fototra azon'izy ireo iasana mba ho tian'ny mpampiasa kokoa. Nifanakalo hevitra tanteraka aho Google Analytics… Ny ankamaroany satria fitaovana saro-pantarina izy io hitako fa mitombo ny isan'ny orinasa mandray fanapahan-kevitra mahatsiravina. Ny tsy firaharahiana ny sivana, ny hetsika, ny fampielezan-kevitra, ny tanjona, sns. Dia hanome data izay hitarika anao hatrany amin'ny làlana diso.
Ny fampitandremako dia ny Google Analytics a maotera fanontaniana, tsy an motera mpamaly. Isaky ny manainga tabilao ianao ary mamaky ny angon-drakitra… tokony hanontany ianao hoe inona no tena jerenao ary manandrana mamantatra ny antony isehoany amin'ny fomba fisehoany.
Somary solontena ihany koa ny Google Analytics satria manafoana ny anaran'ny mpitsidika izay miditra ao amin'ny kaonty Google. Izany dia mahatonga ny tatitra toy ny fikarohana teny lakile izay nahatonga ny mpitsidika ny tranokalanao tsy hisy ilana azy satria mampiseho anao mpampiasa tsy fantatra anarana izay tsy tafiditra… izay vitsy an'isa matetika.
Mazava ho azy, ny ankamaroan'ny mpampiasa - izay niditra ao amin'ny kaonty Google - dia manana angon-drakitra manankarena izay i Google irery no afaka mahita sy mampiasa azy amin'ny doka. Ho an'ny orinasa iray manao hoe, Aza Ratsy Fanahy… ratsy karazana izany. Izany dia nilaza fa manjaka amin'ny indostria ny Google Analytics ka tokony hahay hampiasa azy isika rehetra.
Rehefa manamafy ny fameperana ny fiainany manokana ny mpitety, ny programa mail, ary ny fampiharana finday… ny fahaizana mamaky cookies an'ny antoko fahatelo (toy ny mpampiasa Google miditra) dia mihena haingana. Misy fiatraikany amin'ny Google Analytics ihany koa io ary hahaliana ny mahita ny halehiben'ny fiatraikany. Na dia manana fizarana tsena lehibe aza ny Android sy Chrome, dia tsy misy isalasalana ny fanjakan'i iOS. Apple dia manohy mametraka fitaovana marobe hatrany am-pelatanan'ireo mpampiasa azy mba hampihena ny fanarahan-dia.
Maivana ny script an'i Plausible - Avo 17 heny noho ny script Google Analytics, tsy mampiasa mofomamy na manara-maso angona manokana ka mifanaraka tanteraka amin'ny lalàna mifehy ny fiainana manokana, ary mbola mampiasa singa querystring UTM ka tsy mila miahiahy momba ny fahaverezan'ny fanarahan-dia amin'ny fanentanana efa nataonao ianao. Misy koa ny tatitra mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny mailaka raha mitady vahaolana atrehin'ny mpanjifa ianao.
Ny plausible dia mivezivezy amin'ny isa metrika kely kokoa ary mampiseho azy ireo amin'ny takelaka misy azy mora kokoa. Raha tokony hanaraka ny metrika rehetra eritreretina ianao, maro amin'izy ireo izay tsy ho hitanao mihitsy ny fampiasana azy, ny plausible kosa dia mifantoka amin'ny statistikan'ny tranonkala tena ilaina ihany.
Tsy misy menio fitetezana. Tsy misy sub-menus fanampiny. Tsy ilaina ny mamorona tatitra manokana. Plausible dia manome anao dashboard analytics an-tranonkala tsotra sy mahasoa avy ao anaty boaty.
Plausible dia mora ampiasaina ary takatra tsy misy fiofanana na traikefa teo aloha. Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fifamoivoizan'ny tranokalanao dia amin'ny pejy iray:
Safidio ny elanelam-potoana tianao hofakafakaina. Ireo nomeraon'ireo mpitsidika dia aseho ho azy amin'ny grafika isan'ora, isan'andro na isam-bolana. Ny fe-potoana voafetra dia napetraka ao anatin'ny 30 andro farany.
Jereo ny isan'ny mpitsidika tsy manam-paharoa, ny fahitana ny pejy manontolo, ny taha naoty ary ny faharetan'ny fitsidihana. Ireo metrika ireo dia misy fampitahana isan-jato amin'ny vanim-potoana teo aloha ka azonao tsara raha miakatra na midina ny fironana.
Eo ambany eo ambany indrindra dia ahitanao ireo loharanom-pifamoivoizana farany ambony sy ireo pejy rehetra be mpitsidika indrindra amin'ny tranokalanao. Ny tahan'ny fiakarana isaky ny referral sy pejy dia tafiditra ao koa.
Eo ambanin'ny loharanom-pahalalana sy ireo pejy notsidihina indrindra dia hitanao ny lisitry ny firenena niavian'ny fivezivezenao. Azonao atao koa ny mahita ny fitaovana, browser ary ny rafitra fampiasan'ny mpitsidika anao.
Farany nefa tsy farany, azonao atao koa ny manara-maso ny zava-mitranga sy ny tanjona hamantarana ny isan'ny mpitsidika niova fo, ny tahan'ny fiovam-po, hahafantarana hoe iza no miova fo sy ireo tranokala referral izay mandefa ny fifamoivoizana izay mamadika ny tsara indrindra.
Miaraka amin'ny Plausible dia mahazo indray mipi-maso ny analytics rehetra momba ny tranonkala ianao mba hahafahanao mifantoka amin'ny famoronana tranokala tsaratsara kokoa.
Raha ny cookies, azonao atao ihany koa ny manangana proxy handefa ny script amin'ny analytics ny fonenanao anaranao ho toy ny fifandraisana amin'ny antoko voalohany ary ahazoana statuta marina kokoa. Ny tsara indrindra dia tsy ho zaraina na amidy amin'ny antoko fahatelo na oviana na oviana ny angon-tranonkala. Tsy horaisina ho vola, hotrandrahana ary hojinjaina mihitsy ho an'ny fironana manokana sy fitondran-tena.
Tsy maimaim-poana ny plausible, fa tena takatry ary mifototra amin'ny isan'ny tranokala sy ny fizarana pejy azonao.
Manomboka amin'ny fitsapana maimaimpoana Jereo ny Demo mivantana
Tags: Analyticsfanentanana amin'ny analyticsfanadihadihana cookielessanalytics moraanalytics an'ny antoko voalohanyGoogle Analyticsgoogle analytics safidyanalytics maivanaMitombinaanalytics mifanaraka amin'ny fiainana manokanaanalytics tsotraUTM